SPC Environmental Floor Extrusion Line - China SPC mpamatsy tany amin'ny tontolo iainana Extrusion, Factory –Jwell
SPC Tontolo iainana Extrusion gorodona
Ny gorodona SPC avoakan'ny fitaovana fototra an'ny'S'S dia mamaky milina kalender efatra, ary sarimihetsika miloko PVC + mitafy PVC + fototry ny membrane, manindry manaraka ary apetaho ireo horonantsary ireo mba ho vokatra, dingana tsotra, fenoy ny paty miankina amin'ny hafanana, eo tsy misy lakaoly.
Tombontsoa amin'ny fantsom-panafody tontolo iainana SPC
● Tsy tantera-drano sy moistureproof, afaka mamaha ifotony ny olan'ny vokatra vita amin'ny hazo toy ny mora simba sy mihalevona aorian'ny fitrohana rano na voakasiky ny tontolo mando. Noho izany, ny gorodona WPC an'ny orinasanay dia azo ampiasaina amin'ity karazana tontolo iainana izay tsy azon'ny vokatra hazo nentim-paharazana ity.
● Be loko, maro ny loko tsy voatery. Misy ny fahatsapana hazo voajanahary sy ny firafitry ny hazo, ary azonao atao koa ny mifidy ny loko ilainao mifanaraka amin'ny toetranao.
● Fiarovana ny tontolo iainana, tsy fandotoana, tsy misy loto, fanodinana. Ny vokatra dia tsy misy benzène sy formaldehyde, vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana, mampihena ny fampiasana kitay amin'ny laoniny, ary mety amin'ny fampandrosoana maharitra ny politikam-pirenena izany ary manasoa ny fiaraha-monina ihany koa.
● Fandoro afo tsara. afaka mampiato ny afo amin'ny fomba mahomby, ny haavon'ny haavo haavo B1, raha ny vokatra mikasika ny afo dia ho faty avy hatrany ny afo ary tsy hamokatra entona misy poizina.
● Mora apetraka, mety amin'ny wok, fomba fanamboarana tsotra, mamonjy fotoana sy sarany apetraka.
● Tsy vaky, tsy manitatra, tsy misy endrika, tsy manamboatra sy mitazona, mora diovina, vonjeo aorian'ny fanamboarana ary aorian'izay maka sarany.
PVC Multi Layer Heat Insulate Corrugated Board Extrusion Line